मेरो जागरण मेरो जीवन भाग - १५ - Jagaran Post
मेरो जागरण मेरो जीवन भाग – १५
जागरणपोस्ट २५ चैत्र २०७५, सोमबार ०८:००
जाबो जम्दारको पनि के बखान गर्न लागेको सोच्नु भएको भए एक छिन पर्खनु होस् । यो बेलाको जम्दारको कुरा गर्न लागेको हैन उ बेलाको जम्दार को कुरा हो । राणा जीको पालाको जम्दार । सायद सर्वसाधारण उक्त पदमा कमै पुग्ने रहेछ्न् क्यारे यस क्षेत्र बाट । मिल्सिया (नेपाली सेना)को जम्दार ।
हजुर ! उनै जम्दार भ्वाने अचार्ज (आधिकारिक नाम -भवानी शंकर आचार्य) को त्यो बेलामा शान र शक्तिको संस्मरण हजुर आमा र उहाँकै भानिज बालकृष्ण भण्डारीको मुख बाट जे जति सुने यहाँ हरु समक्ष राख्न चाहन्छु । आफूले त बाबुको काखको न्यानो त राम्रो अनुभूति गर्न नपाएकोले जम्दार हजुर बुबाको मुख देख्न पाउने कुरै भएन। धन्न सात वटी हजुर आमा मध्य तीन वटी हजुर आमाको मुख सम्म देखियो भने एउटी हजुर आमाको ९ बर्षको हुँदा सम्म काखको न्यानो समेत पाइयो । हजुर बुबाको केही सामान भने देख्यौं पनि त्यो बेला त्यस्ता अमुल्य सामानको महत्व बुझ्न पाएको भए , खेलौना बनाउने फ्याँक्ने बेच्ने गरिन्थ्यिएन होला । ऐले सम्झेर पछुतो मान्ने बाहेक केही रहेन ।
हजुरबुबाको अति निकट र प्रिय पात्र पनि उहाँकै भानिज बालकृष्ण भण्डारी जीवनको उत्तरार्धमा केही समय (करिब एक बर्ष) हामी सँगै बस्नु भयो । उहाँ पनि मिल्टरी बाट अवकाश प्राप्त हुनु हुन्थ्यो तर पेन्सन भने बुझेको थाह पाइएन । अन्तिम अवस्थामा यहीँ मामाको थलोमा मर्छु , जे गर्न पर्छ तिमी हरुले नै गरि देउ भन्नु हुन्थ्यो । पछि आफ्नो घर फर्किनु पनि भएन । के चोट परेर निस्कनु भएको रहेछ । त्यो त हामीलाई थाहा भएन ।
भलाममा हजुर बुबाले खेत सहित दिनु भएको रहेछ । हजुर बुबाको मरणो परान्त दान दातब्यमा प्रसस्तै सम्पती पाएको थिएँ भन्नु हुन्थ्यो । घोडा र घोडाका सेवक सहित उहाँले नै पाएको पनि उहाँकै मुख बाट सुनाउनु भएको थियो । गोह्रो अग्लो जति बेला पनि हँसिलो अनुहार तर केही कुप्री परि सक्नु भएको थ्यो । तर आफूले भने जस्तो भएन , भनेको मानेनन् भने झट्ट रिसाई हाल्ने स्वभाव थियो उहाँको । सायद त्यही बानीले गर्दा घरमा कुरा नमिलेर हिँडेको हुनु पर्छ ।
म १२/१३ बर्षको हुँ उहाँ त्यसरी आफ्नो घर छोडेर आउँदा । मलाई असाध्यै माया गर्नु हुन्थ्यो । आएको एक हप्ता जति ठूलो बुबाको घरको धन्सारमा बस्नु भयो । दिउँसो जता गए पनि राती मलाई छोड्नु हुँदैन थ्यो ।
कारण थियो उहाँले आफ्नो विगत सुनाउने विश्वास पात्रको । त्यो भाग्यमानी पात्र म नै थिएँ । कहिले आफ्नो विगत सुनाउनु हुन्थ्यो भने कहिले आफ्नो मामा(मेरो हजुर बुबा)को पौरख कत्ति नबिराई क्रमबद्ध रूपमा सुनाउनु हुन्थ्यो । केही रोचक अंश राख्ने प्रयास गर्छु ।
“सानै देखि मामा घरै हुर्केकोले म मामाको साह्रै प्रिय पात्र थिएँ । मामा र माइजू हरूले मलाई हुरुक्कै गर्नु हुन्थ्यो । मेरो बिहे नभैन्जेल प्रायः मामा सँगै बसें । सालना माइजू हरु थपिँदै जान्थे । बाहिरी माइजू पनि छ्न् भनेर माइजू हरूले भन्नु हुन्थ्य्यो यदाकदा । तर मैले देख्ने भेट्ने अवसर भने पाइन । मामा बिते पनि कोही हक दावी गर्न आएनन् ।
• बाहिरी माइजू कहाँ थिए कस्तो अवस्थामा थिए रहस्य मै रह्यो । घर भएका सात माइजु मध्य सबैलाई मिलाई दक्षता अनुसारको काम बिभाजन गरि दिनु भएको थियो । घरमा सबै अनुशासित थिए । मामा आए पछि बच्चा बच्ची रुवाउन पनि नपाइने साह्रै कडा अनुशासन । पानी पँधेरो टाढा भएकोले दुईटी माइजुको काम पानी ल्याउने मात्रै थियो । दुहुना लैना बकेर्ना टुट्दैनथे । घोडाको रेखदेखमा मैले पनि सघाउँथे । भाइ बैनी हरू सानै र माइजू हरूलाई घोडाले टेर्दैन थे पनि । तबेलामा घोडा खाली भएको मैले कहिल्यै थाहा पाइन । कथम कदाचित मरभाग भएमा तुरुन्त बदलामा अर्को आइ हाल्थ्यो । मामा जता गए नि घोडामा नै हो । उ त्यहाँ तबेला थियो ! त्यहाँ गोठ , उहाँ त्यहाँ कचहरी बस्ने ठाउँ । तह अनुसारको भिन्दा भिन्दै बस्ने ठाउँ थियो । कसैले मर्यादा उल्लंघन गर्न पाउँदैन थे ।तर मलाई त्यस्तो परिवन्द क्यै थिएन । कचहरी हुँदा माइजू हरु त्यहाँ आउन पाउँदैनथे । हुक्का तयार भए पछि प्राय: मैले नै ल्याउँथे । आफूले खाने हुक्का र अरुलाई सम्मानार्थ दिने हुक्का पनि अलग अलग थिए । नजिकैका भेला हुँदा भने नली फेरेर एउटै हुक्का पनि खान्थे । मामाले खाने नलीले मैले पनि खान पाउँदैनथे । जग्गा जमिन त कति हो कति ? जता गए नि हाम्रै । खेत भने त्यही भलाम (डाँडा कटेरी)को मात्रै थाहा छ । केही खेत मामा छँदै हामीलाई दिनु भएको हो । मेरो बिहे भए पछि एउटा घोडा पनि दिनु भएको थियो । मेरो बिहेमा पनि मामा कै घोडा चढेको हुँ । जम्दार भ्वानेको भानिज भने पछि सान नै अर्कै । तर मामाको त्यो सान वैभव दैवलाई सैह्य भएन्छ कि भाग भोग नै त्यति नै रहेछ । एकाएक भताभुङ्ग भयो भाइ बहिनी (मेरो बुबा हरु र फुपू हरु )हरू टुहुरा भए । म झनै टुहुरो भएँ । माइजू हरू लाखा पाखा लागे । मेरो धरोहर ढल्यो । मामा एकदम हृष्टपुष्ट हुनुहुन्थ्यो , दिर्घ रोग क्यै थिएन । त्यो दिन त्यस्तै एक टँगालो घाम छँदै फर्किनु भएको थियो रे आउने बित्तिकै हुक्का तयार पार्नु पर्थ्यो । घोडा तबेलामा बाँधेर हुक्का पनि खानु भयो रे एक छिन पछि मुटु खायो मुटु खायो मुटु खायो भन्दै हुनुहुन्थ्यो रे घाम नअस्ताउँदै छोड्नु भएछ । मैले मुखमा पानी हाल्न नि पाइन बाबू मेरो जिन्दगीमा यो भन्दा ठूलो पछुतो क्यै छैन बाबू भनेर भक्कानिनु भयो । टुकीको मधुरो उज्यालोमा बर्र आँसु स्पष्टै देखिन्थ्यो । त्यस पछि टुकी आँफैले निभाउनु भयो र घुप्लुक घोप्टिनु भयो । म पनि उहाँकै खोकिलामा निदाएछु ।
(यस भागको बाँकी अंश अर्को भेटमा )
पढ्नुहोस – मेरो जागरण मेरो जीवन भाग – १४